2 Timote 4 - Ny Baiboly
Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'i Timote
2 Timote toko 4
Famporisihana hitory teny sy hiasa mafy - Hafatra sasany sy fanaovam-beloma.
1Izao no angatahina aminao, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny Kristy Jesoa, izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny andro hahatongavany sy hanjakany: 2mitoria ny teny, ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana: manitsia, mananara, mamporisiha, amim-pandeferana sy amim-pahaizana mandrakariva. 3Fa ho avy ny andro tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana marina intsony; fa mpampianatra araka ny filàny no hovoriny ho azy sy hahalian-tsofina azy; 4dia hanentsin-tadiny amin'ny marina izy ireo, fa hanongilan-tsofina amin'ny angano foana. 5Fa hianao kosa, malìna amin'ny zavatra rehetra, miareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny mpitory Evanjely, ary imasoy ny anjara raharahanao. 6Fa izaho dia mova tsy ny efa haidina ho fanatitra sahady, ary efa antomotra ny andro hialako. 7Niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho; 8hany sisa hataoko dia ny mandray ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo mpitsara marina ahy amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny hahatongavany koa.
9Tongàva faingana aty amiko hianao; fa nilaozan'i Demasy aho, noho ny fitiavany an'izao tontolo izao, ka lasa nankany Tesalonìka izy. 10Kresensy lasa nankany Galatia, ary Tito any Dalmatia. 11Lioka irery no eto amiko, ka alao Marka, ento miaraka aminao, fa manampy ahy fatratra amin'ny raharaha izy. 12Tisiko dia nirahiko ho any Efezy. 13Ento kely ilay kapaoty navelako tany Troasy ao amin'i Karposa rahefa mankaty hianao, ary ny boky koa, fa indrindra ny taratasy hoditra. 14Be loatra ny ratsy nafitsok'i Aleksandra mpanefy varahina tamiko; ny Tompo no hamaly azy araka ny asany. 15Ary hianao koa mitandrema tena tsara aminy, fa mafy izay nanoherany ny teninay izay.
16Tsy nisy nanampy ahy tamin'ny nandaharako voalohany hiaro tena; fa nilaozan'izy rehetra aho; enga ka tsy hotanana ho helony izany! 17Kanefa tonga namonjy ahy ny Tompo, sy nankahery fo ahy, mba hanatontosako ny fitorian-teny, sy handrenesan'ny jentily rehetra azy, sady nesorina teo am-bavan'ny liona aho. 18Hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ny Tompo, ary hamonjy ahy ho amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amena.
19Veloma any amin'i Priskà sy Akilasy ary ny fianakavian'i Onesiforo. 20Nijanona any Korinto i Erasta; ary navelako any Mileto i Trofimo fa narary. 21Aza ela, fa tongava aty alohan'ny ririnina. Manao veloma anao Eobolo, sy Podensy, sy Lino, ary Klaodià, mbamin'ny rahalahy rehetra.
22Ho amin'ny fanahinao anie Jesoa-Kristy Tompo. Ary ho aminareo anie ny fahasoavana. Amena. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0085 seconds